မေးလ်(Mail) တွေအရမ်းဝင်လို့ စိတ်ညစ်နေလား...? - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
မေးလ်(Mail) တွေအရမ်းဝင်လို့ စိတ်ညစ်နေလား...?
Posted by ရဲဂျာ on May 30, 2011 at 6:55am in အကူအညီများတောင်းခံရန်
ကျနော်တို့ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ဆိုဒ်ဟာ အဖွဲ့ဝင်မန်ဘာများ၊သူငယ်ချင်းများ အားလုံး သတင်းအချက်အလက်၊
နည်းပညာ၊ ဗဟုသုတ ဖျော်ဖြေရေ အစရှိသည်တို့ ကို အသင်းဝင်မန်ဘာများ အချိန်နှင့်အမျှ သိရှိစေရန်
အတွက် မကြာခဏ အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ Check Out မေးများ ပေးပို့လျက်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် တချို့သော
မန်ဘာများမှာ ထိုမေးများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရသည် ဟု မကြာခဏ တိုင်တန်းအကြံပေး
ချက်များ ကိုကျနော်တို့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ လက်ခံရရှိပါသည်။ ထိုပြဿနာ ကို Ning ၏ Profile setting
မှ ထိုဝင်ေ၇ာက်လာသောမေးများကို နောက်ထပ်မ၀င်စေရန် ပိတ်ပစ်၍ရနိုင်ပါသည် ။ သို့သော်ထိုသို့
ပိတ်ပစ်လိုက်ပါက ကျနော်တို့ မြန်မာချစ်သူမှ ပေးပို့သော မေးများလုံးဝမ၀င်နိုင်တော့ပါ။
ထို့ကြောင့် အရေးကြီးသောမေးများ သတင်းအချက်အလက်များကို အဖွဲ့ဝင်များလက်ခံရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ အတ်မင်အဖွဲ့မှ နှစ်ဦး ၂ ဖက် အဆင်ပြေစေမည့် နည်းလမ်းတခုကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကျနော်တို့ Gmail ကနေ မြန်မာချစ်သူမိသားစု(MMCFamily) ကို Filter ခွဲထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခု ကျနော်တင်ပေးသော Gamil မှ Filter ခွဲနည်းဖြင့်ခွဲထားပါက သူငယ်ချင်းတို့ ၇ဲ့ Gmail InBox ထဲသို့ မြန်မာချစ်သူမှ မေးများလုံးဝနောက်ထပ်ဝင်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီနည်းလေးကို အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး
Gmail ရဲ့ အားသာချက်GEmail ကို Filter လုပ်လို့ရပါသေးတယ်...
Gmail ရဲ့ ပေါ်ဆုံးထောင့်လေးမှာ setting ဆိုတာလေးကို အရင်ဆုံး click လေးပေးလိုက်...
အောက်က ပုံပေးတွေကို အဆင့်ဆင့်ကြည့်သွားလိုက်ပါ....
ပြီးရင် အောက်ကပုံလေးလို ပေါ်လာလိမ့်မယ်.....
အဲလို creat လုပ်ပြီးတာနဲ့ ခေါင်းစီး Labels ဘေးနားက Filter ကို နှိပ်လိုက်ရင်
အဲလို click ပေးရင် အောက်ကပုံအတိုင်း ဆက်လုပ်လိုက်ပါ... အဲဒီမှာရိုက်ထည့်မဲ့ လိပ်စာကတော့
ပြီးတာနဲ့ Next Step ကို ဆက်နှိပ်ပါ ခင်ဗျာ...
Choose Lable ကို click ပေး၊ မြန်မာချစ်သူမိသားစု မှ mail ကို click ဆက်ပေးပါ...
ပြီးတာနဲ့ Skip the Inbox ဆိုတာလေးကို အဓိက click ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
ပြီးရင် Creat Filter ကိုတဆက်တည်းနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
နောက်ဆိုရင် mail တွေက Inbox ထဲကနေကျော်ပြီး မြန်မာချစ်သူမိသားစု ဆိုတဲ့ဆီကို
MMC Family Admin Group
Permalink Reply by T@n$heJue on May 30, 2011 at 7:46pm ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Permalink Reply by kyaw oo on May 30, 2011 at 8:11pm mmc ကနေ ကျနော် online ပေါ်ရောက်ခဲ့တယ်လေ...
ကျနော်ကတော့ ဘယ်တော့မှ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး....
Permalink Reply by အညာမြေ on May 30, 2011 at 8:17pm ကျွန်တော်မှာတော့လုပ်လို့မရဘူးဗျာ ဒီမှာရွာလည်နေတယ်ဗျာ ကူညီပါဦးနော်
Permalink Reply by ဂျူလိုင်မင်း on March 21, 2013 at 2:30pm ငါရောပဲဟ ▶ Reply
Permalink Reply by yemintun on May 30, 2011 at 8:17pm mmc ကနေ ကျနော် online ပေါ်ရောက်ခဲ့လေ....
Permalink Reply by ပျိုတို့မောင် on May 30, 2011 at 9:35pm ရှဲရှဲပါ...
Permalink Reply by babylay on May 31, 2011 at 10:23am ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
Permalink Reply by ninisoethein on May 31, 2011 at 2:46pm လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ့မယ်။ မိမိအသက်အရွယ်အရ လိုအပ်တဲ့မေးရှိသလို မလိုအပ်တဲ့မေးလဲရှိတယ် နောက်ပြီး တခြားဆိုဒ်တွေကလဲ ဝင်တာရှိသေးတယ်လေ အဲဒါကြောင့်မို့ ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Permalink Reply by u hla yee on June 1, 2011 at 8:25am့  ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Permalink Reply by julylusoe on June 1, 2011 at 9:27am Thank you very much for your everything.
Permalink Reply by kyaw thu aung on June 1, 2011 at 10:57am မလုပ်ပါဘူးဗျာတချိုမေးတွေကအရေးကြီးသလိုအသုံးလဲဝင်ပါတယ်
Permalink Reply by Htet Htet Aung on June 2, 2011 at 5:03pm အိုကေသွားပြီ ကျေးဇူးနော်။
လက်ဆောင်ပေးမယ် aung ko
လက်ဆောင်ပေးမယ် aung myo
လက်ဆောင်ပေးမယ် botak hlaing
လက်ဆောင်ပေးမယ် Chaene Okparah
လက်ဆောင်ပေးမယ် Chan Moh Moh Shein
လက်ဆောင်ပေးမယ် chue lay
လက်ဆောင်ပေးမယ် Eaint Thiri
လက်ဆောင်ပေးမယ် fancy angel
လက်ဆောင်ပေးမယ် Hein htet